Yaman: Gobolka Saacda, ayaa MSF ay Waxqabad ka Waddaa iyada oo uu Dagaalkuna sii Xoogeysanayo - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa daryeelka degdegga ah siineysey dhaawacyada dagaalka ilaa markii uu dhowaan dagaal dib uga bilowdey Gobolka Saacda, ee waqooyiga-galbeed ee Yaman. Afar toddobaad ka hor ayaa dagaal soo cusboonaadey oo u dhexeeya ciidamada Yaman iyo fallaagada Al Xuuthi ka bilowdey Gobolka Saacda. Iskudhacyo rabshado/cunfi leh wata ayaa soo noqnoqonayey, kuwaas oo badidoodu ka dhacayeen hareeraha Magaalda Saacda, gaar ahaan waddada u dhaxaysa Saacda iyo Baqiim, iyo meel galbeed ka sii xigta oo ah hareerraha Xaydan iyo Malaxiid.
Muddadii u dhaxaysay 11kii Agoosto ilaa 2dii Sebtembar, ayaa shaqaalaha MSF ay 515 la-talin caafimaad oo degdeg ah ku sameeyeen cusbitaalka Al Taxl. Koox qalliinka qaabilsan ayaa saameeysey hawlgallo 120 ah, kuwaas oo saddex-meeloodow laba ay ahaayeen dhaawacyo ka dhashey dagaalka.
“Markii dagaalladu ay mar kale ka bilowdeen magaalada Al Taxl, waxaa ina soo gaarey dhaawacyo badan,” ayaa uu yiri Arnaud Drouart, oo ah Suuxiyaha MSF ee cusbitaalka Al Taxl. “Baabuur Pick-up ah ayaa imanaya isaga oo wada saddex ama afar qof oo dhaawac ah. Maalintii koowaad ee dagaalka, ayaa laba ama saddex baabuur oo kuwaan ahi ay yimaadeen.”
MSF ayaa ah hay’adda keliya ee caafimaad ee caalami ah oo awood u yeelatey in ay ka sii shaqeyso degaanka ilaa markii ay dagaalladu dib u soo cusboonaadeen. Waxqabadyada ay ka waddo cusbitaallad Razeh iyo Al Taxl, ayaa MSF waxa ay sameyneysaa wax kasta oo suurtagal ah si ay sida ugu suurtagalsan ay ugu dhowaato dadweynaha iyada oo isla markaasna hubineysa ammaanka bukaannada iyo kooxaha caafimaadka.
Waxaa khasab noqotey in qaar ka mid ah shaqaalaha MSF ee caalamiga ah laga soo saaro gobolka, waxaana aad loo adkeeyey ku dhex safridda degaankaa. In kasta oo cusbitaalka aan marna la weerar lala soo beegsan, hadddana awooddii ay MSF u lahayd in ay daryeel ku bixiso ayaa mararka qaar ay dhibaato soo gaartey. “Marka uu dagaalku ka socdo meel dhow waxaa mar kasta dhici kara khalad, sida xabado wiifto ah,” ayaa uu yiri Drouart. “Waxaa ina soo marey xabbad wiifto ah ama firir, ma garaneyno mid uu ahaaye, oo ka soo dhex dusey teendho oo halkaana ku dhaawacay xubin shaqaalaha ka mid ah. Labo ama saddex jeer, ayaa aan ku khasbanaaney in aan dib u dhigno qalliin aan sameyn lahayn, sababta oo ah waxaa halis noqotey in aan teendhooyinka ka soo qaadno bukaannadii la qali lahaa. Waxaa aan ku wada negaan jirney saalada qalliinka nusa saace ama saacad, annaga oo sugeyna in dagaalka ka dhacaya meel inoo dhow uu istaago si aan bukaanka u geyno qolka soo kabashada.”
Maaddaama la xakameeyey safarka, ayaa kooxaha MSF aaney awood u yeelan in ay si faahfaahsan u qimeeyaan raadadka uu reebey dagaalka ama sida ay dadku u helayaan daryeel caafimaad.
Tags: Al Xuuthi, colaad, deg-deg, la-talin caafimaad, Saacda, waxqabad, Yemen